Shiinaha SUS304 xawaaraha sare 14 madaxa warshad miisaanka badan leh iyo soosaarayaasha | Smart Miisaan
14ka madax ee miisaanka badan leh waa codsi ballaadhan marka la barbar dhigo 10 madaxa miisaanka madaxa badan. Waxay ku habboon tahay xawaare sare ama mashruuc sax ah oo sarreeya, sida mashruuca xirxiran 60-100 boorsooyin / daqiiqad ah.
Volume Volume: 1.6L / 2.5L
7 ”ama 10” shaashadda taabashada
Miisaaniyadda 14 weji wejiga badan ayaa ah cod balaaran marka la barbar dhigo 10 madaxa cabbirka badan ee madaxa. Waxay ku habboon tahay xawaare sare ama mashaariic saxsan oo sare, sida 60-100 jawaano / min mashaariic xirxiraan xirmooyinka.
• Waxay leedahay culeys ka badan 16,000 oo isku-dhafan oo sax ah
• Nidaamka xakamaynta gudiga qaybsan, guddiga loo yaqaan 'Smart Weigher's modular board' ayaa amar ku bixiya dhamaan moodooyinka, fududna dayactirka.
• 1.6L ama 2.5L roogagga culeyska badeecada iyo mugga kala duwan.
• Qeybaha taabashada cuntada ee kala baxa iyada oo aan la isticmaalin qalab, taas oo ay fududahay in la nadiifiyo.
Xiga: Isku dar ah SUS304 24 wejiher madax wejiga oo dhan
Miisaan cunto fudud